Taxane ilaaliye Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Taxane ilaaliye Forex Tusiyaha
Taxane ilaaliye Forex Tusiyaha
Taxane ilaaliye Forex Tusiyaha waa tilmaame arrimuhu ka dib markii a. Waxaa inta badan u isticmaalaan ganacsatada muddada dheer. Tani waa maxaa yeelay waxa ay muddo aad u dheer qaadato waayo, waxaa in la siiyo signal a. Sababta ka danbeysa middaan waa in ay jiraan wax badan oo ka mid ah shuruudaha in la kulmay geynta tilmaame ka hor inta ay go'aansato waxa signal u kacdo in la siiyo.
Sababtan awgeed ganacsade ah wuxuu leeyahay si loo xaqiijiyo in uu isagu ama iyadu leedahay lacag ku filan isaga ama iyada account in ay hor istaagi qaar ka mid ah retracements in dhici kartaa gudahood ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee xitaa this isagoo xaqiiqda ah, tilmaame tani weli waa tilmaame aad u hufan iyo mid aan marnaba ka dhigi doonaa khasaaraha haddii ay si sax ah iyo si caqli ah waxaa loo isticmaalaa. Marka ganacsiga la furay, waxaa laga yaabaa in ay qaataan waqti qaar ka mid ah ganacsade si aad u bilowdo ogaaday faa'iidada laakiin mar faa'iidada bilaabo inuu rogo in, ganacsade ah ka dhigi doonaa lacag aad u badan ee lacag caddaan ah. Inta badan waxay qaadan doontaa maalin badhkeed ah signal a in la siiyo. Sayidka, Tilmaame aan la qorsheeyay in la saadaaliyo bed suuqa yar laakiin isbedelka suuqa muddada dheer.
tilmaame ilaaliye Warku foomamka line a socda qiimaha suuqa ee qariirada ganacsiga ah. line Tani badala midabka ka cas qeybsanaan buluug iyo ku xigeenka. tilmaame ayaa sidoo kale siinaya signal qoraal ah oo la soo bandhigay on geeska top saxda ah ee shaxda. Qoraalka waa mid "Short" ama "Long" iyo waxaa inta badan soo bandhigay tusaale ahaan marka isbedel midabka. The "Long" text waa ku cagaar midabka halka "Short" text waa guduudan yahay midab. Ka hor inta isbedel midab ah, line waxay u egtahay in ay ku mashqoolay qoto dheer hoos. Haddii aad eegto si dhow ula at line ah, Waa cad dahay in marka line uu noqdo mid cas oo sida caadiga ah waa ka sii sarreeyaa laambadihii ama baararka, laakiin marka ay tahay buluug, badanaaba waa hoos laambadihii ama ulood oo arrintan ku.
lagugu tuday sawirka.1. The tilmaame ilaaliye Taxana geliyo gal shaxda ah.
Sida loo isticmaalo Taxana tilmaanta ilaaliye.
Ka hor inta uusan go'aansan in la isticmaalo tilmaame this, aad leedahay si ay u daboolaan waxyaabaha soo socda:
– Aad leedahay si aad haysato lacag kugu filan in aad xisaabta ee la xiriirta saami ah in aad rabto in aad isticmaasho in furitaanka Xirfado.
– Waxaad si ay u noqon a ganacsade muddo dheer ah, ama aad ka fekereyso inaad si ay u isticmaalaan tilmaamahan in ay ku ganacsan muddada dheer. Tani ma aha, waayo, scalpers.
– U leeyihiin in ay samir oo ay bartaan inay ku kalsoon tahay tilmaanta.
Taxane ilaaliye Tusiyaha dhigaya amar iibiyay: waayo, ganacsade ah in meel la iibiyay a, ah "Short" text waa in la soo bandhigay. Markaas line waa in ay ahaataa cas iyo kor laambadihii. Sida ganacsade ah faa'iido badnaan iyo maaraynta khatarta, Waa in aad meel aad si muddo gaaban gudahood ka dib "Short" text iyo midabka isbedel inay cas dhacdaa. Iska ilaali gelinayn aad si aad u soo daahay tan iyo markii laga yaabaa inaad samaynta khasaare.
Fig.2. Taxane ilaaliye Tusiyaha Muujinaya sida in meel la iibiyay iyo waxa la xiro.
Saarid amar buy: waayo, ganacsade ah in meel la iibsan a, ah "Long" text waa in la soo bandhigay. Markaas line waa in ay ahaataa buluug iyo hoos laambadihii. Sida ganacsade ah faa'iido badnaan iyo maaraynta khatarta, Waa in aad meel aad si muddo gaaban gudahood ka dib "Long" text iyo midabka isbedel inay buluug dhacdaa. Iska ilaali gelinayn aad si aad u soo daahay tan iyo markii laga yaabaa inaad samaynta khasaare.
Fig.3. Taxane ilaaliye Tusiyaha Muujinaya sida loo dhigo abuy iyo waxaad kalood ka helaysaa sida loo xiro.
Taxane ilaaliye Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Taxane ilaaliye Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Taxana ilaaliye Forex Indicator.mq4?
Download Taxana ilaaliye Forex Indicator.mq4
Copy Taxana ilaaliye Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Taxana ilaaliye Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Taxana ilaaliye Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Taxana ilaaliye Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousFX Turbo gooldhalinta Forex Tusiyaha
Next articleMulti guurista Celceliska Forex Tusiyaha